Krita 4.2.2 iri pano ine ingangoita makumi mashanu kuvandudzwa uye kugadzirisa bug. | Linux Vakapindwa muropa
Chirongwa chakakurumbira chekudhirowa chakagadzirwa "nevevanoita zvemifananidzo" yatanga vhezheni itsva. Ndezve Krita 4.2.2, vhezheni ye (chetatu) poindi iyo, sekudaro, yauya kupolish vhezheni dzapfuura. Sezvatinoverenga mu kusunungura chinyorwa, KDE Nharaunda iri kuyedza kuburitsa ekugadzirisa ekugadzirisa mwedzi wega wega weiyo 4.2 nhepfenyuro kusvika inotevera huru kuburitswa yasvika, Krita 4.3 iyo, mukuwedzera kune bug kugadzirisa, ichasanganisira yakakosha mabasa.
Pakazara, iyo ichangoburitswa Krita v4.2.2 maficha ingangoita makumi mashanu ekugadzirisa, 49 kuti ive chaiyo. Iwo mazhinji acho ane iwo asvika kuzogadzirisa / kugadzirisa zviputi, zvimwe zvinozovandudza ruzivo rwevashandisi senge iyo inokutendera iwe kushandisa yakamisikidzwa bhatani bhatani mune yekusarudza chishandiso sarudzo yemadhoketi kuti zvive nyore kuona kuti ndeipi sarudzo yekuita iri kushanda
1 Chii chitsva muKrita 4.2.2
2 Iye zvino inowanikwa yeLinux, macOS uye Windows
Chii chitsva muKrita 4.2.2
Izvo zvinoita kuti zvikwanise kugadzira iyo yekucheka iyo hanyanisi ganda.
Yakagadziridzwa kurodha maGPL palette mafaera nemazana emakoramu.
Yakagadziridza iyo tiff yekungenisa / kutumira kunze firita.
Yakagadziridza revhisi yemufananidzo chishandiso uye yakagadzirisa kurodha kwemifananidzo kubva kubhodhibhodhi.
Kamera Raw Yekunze Firita ikozvino inogona kuitwa inokudzwa mune batch modhi.
Kugona kuita iyo nyowani yemufananidzo dialog sarudza yekupedzisira yakashandiswa sarudzo kunyangwe mutauro wemushandisi wachinja.
Yakagadziridzwa yekutarisa bhurasho pane ese mabrashi sitampu zvisikwa.
Izvozvi zvave kugona kugadzirisa vector maumbirwo mune duplicate vector materu.
Viga bhatani rekutora ruvara mune vector chinhu zvivakwa docker, haina kuitiswa.
Mikana yekudzorera default unofarira kusanganisa modes.
Zvino unogona wedzera musoro kune ese kurudyi tinya mamenu pane canvas kuitira kuti chinyorwa chekutanga pazasi pechituro hachisi chinhu chine njodzi, senge "cheka".
Inochengetedza nharaunda zvinongedzo pane inopenya skrini inoonekwa kana uchiisa musoro wenyaya.
Ndokumbira utarise usati wachengeta kana iyo faira yakachengetwa inogona kuvhurwa kana ine zvirimo zvirimo.
Yakavandudza manejimendi uye kuburitsa iko kukanganisa paunounza / kutumira kunze.
Iye zvino ita shuwa kuti iyo dialog dialog inoratidzwa pamberi peiyo huru Krita hwindo.
Inoita chokwadi che kuti chishandiso chinobatanidza chinopa switch yekudzivirira antiasing
Kugona kudzima mapoinzi ese pakurongedza sarudzo nekudzvanya.
Inobvisa iyo default mufananidzo rejista yekushandisa zvidhori izvo zvaive zvisina kukodzera.
Yakagadziridzwa Qt kusvika v5.12.4.
Iye zvino inowanikwa yeLinux, macOS uye Windows
Krita 4.2.2 yave kuwanikwa yeWindows, macOS uye Linux. Vashandisi veMacOS neWindows vanogona kudhawunirodha vhezheni itsva kubva papeji rimwe chete zvayakaburitswa (inowanikwa pakutanga kwechinyorwa chino). Vashandisi veLinux vanogona zvakare kurodha pasi iyo AppImage kubva kune imwechete webhusaiti, kana kuisa yako Flatpak vhezheni. Shanduro dzeAPT uye Snap hadzisi dzechizvino. Ndeipi vhezheni yaunoisa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » Krita 4.2.2 iri pano, inouya pamwe ingangoita makumi mashanu kuvandudzwa uye kugadzirisa bug.